Uya Munhualizzare E Marcare I Brevi Collegamenti - Azioni Semalt Aggiornamento
Webhusaiti yehupfumi inobatanidza shorteners haisi chinhu chitsva munzanga yehutano. Zvisinei, zvakanga zvisati zvaitika munguva pfupi yapfuura kuti mabhizimisi akazara zvakanakira kudiwa kwevashambadziri vekugadzirisa zvinyorwa mukutsvaga kwezvimwe zvinyorwa uye zvechokwadi kuti vataure nyaya yavo.
Pane kushandisa zvinyorwa zviduku zvishoma sezviya zveGoogle uye zvisingabhadharwi, funga nenzira iyo iwe unokwanisa kuita iwe pachako kuti uite hukama hutsva hunoratidza mararamiro ako uye unhu hwako. Ingozvireurura, hukama hupfupi hwakapiwa neAkasina hanya hwakanaka, hwakarurama?
Sezvatinocherechedza kuti nhamba dzinokwira, chimwe chinhu chiri kubudazve. Chizhinji chezvikwangwani izvi uye zvakagadziridzwa zvinosanganisira nzvimbo yepamusoro yepamusoro-level domain (abbreviated as TLD) extension - make my logo.com.
Sei vanhu vachienda kuTLDs? Zvinhu izvi, zvakatsanangurwa naMichael Brown, Mutengi Wekugutsikana Kwevatereji Semalt , anogona kubatsira kupindura izvozvo.
Havazovhiringidziki muwebsite yako
Paunoshandisa imwe nzvimbo kuti uumbe zvigadziriswa zviduku zviduku, hazvizoshandisirwe kune chimwe chinangwa kunze kweiyo. Kana iwe uri kuronga kushandisa URL huru sechisungo chekugadzirisa, iwe wakanga uri mukutya. Ndinofara iwe zvino unoziva.
Kune zvakawanda zvakakosha zvekusika mararamiro akasiyana-siyana zvakananga kumagariro evanhu. Semuenzaniso, inobatsira yako kuongorora shanduko yekutengesa nzira yemugwagwa unounzwa nehuwandu hwemagariro evanhu uye unotsvaga. Mukuwedzera pane izvi, iwe unogona here kufunga nezvenzira iyo iri nani yekupa iwe webhusaiti yako yehutano yakasiyana nayo unhu, hwakarurama?
Izvo zvakakosha pane zvaunofunga
Customizable links ndeimwe yezvizhinji zvekubatsira kushandisa zvidzidzo zvitsva. Zvechokwadi, iwe unogona kutarisa unyanzvi hwako kune rumwe rutivi rworuboshwe rwekadhi apo iwe wakasika TLD yakafa asi iyo inongororerwa kusvika pamwero. Kana iwe uri mutsara wekubudisa nhau ipapo kuwedzera kweEEWS kunogona kuva yekare. Vafori vanogona kutarisa a..PHOTO kushandiswa nezvakadaro. Iye zvino shandisa unyanzvi hwako uye uone chimwe chinhu chakanaka.
Mazita makuru mumakambani makuru akatoshandisa nzira iyi. Zvisungo zvakashambadzirwa zviri kuwedzera marimi ekuziva uye kuvaka chivimbo chinotungamirira kukubatanidza zviri nani nekudarika-kuburikidza nehuwandu. Muenzaniso wakakwana ungadai uri Seattle News iyo inoshandisa st.NEWS. Izvo zvinoshandawo kune StubHub (stub.live) uye Chic-fil-A (chicfila.social). Kana iyo inonzi yakanyanya bhomba iri pairi, sei wakasara shure?
Yakagadzirwa zviduku zvisungo zvinowanzovaka kuvimba
Funga nezvenyaya iyi, mumwe munhu anoshandisa mukana wekutsinhanisa ne brand.TV yako kana brand.VIDEO link, vanofunga chii? Ndiudze kana vasingazove nechivimbo mune zvaunofanira kupa. Vatengi vachakuona iwe nechiedza chitsva - iwe uchave pachena uri pro in yako niche. Mumwe munhu anoziva zvavari kuita. Izvo zvinyorwa hazvirevi zvachose - CTR yeBitly yaiva 34% pane iyo inowanzobatanidza. ReBrandly akazvirumbidza nezve 30% CTR mutengo.
1. Tarisa nzvimbo dzako. Ziva chimwe chinhu chaunokwanisa kunyatsoshandisa.
2. Tsvaga iyo yakasarudzwa yekuchepesa webhusaiti. Zvinogona kunge Zvisiri Zvishoma kana ReBrandly kana chero basa.
3. Kana imwe nzvimbo iyo yakanyatsobatanidzwa, iwe wakanaka kuenda.